Tababar Ku Saabsan Maaraynta Xogaha Caafimaadka Oo La Soo Gabagabeeyay |
Tababar Ku Saabsan Maaraynta Xogaha Caafimaadka Oo La Soo Gabagabeeyay
Jigjiga (estvlive) 07/01/2017
Waxaa lagu soo gabagabeeyay hoolka shirarka ee kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka DDSI tababar ku saabsan maaraynta iyo tayaynta xogaha caafimaadka oo ku salaysan adeegsiga aaladaha casriga ah.
Tababarkan oo uu soo diyaariyay xafiiska caafimaadka DDSI oo muddo 6 maal-mood ah socday ayaa waxaa loo hayay 82 xubnood oo ka kala socday xarumaha caafimaadka iyo xafiisyada caafimaadka ee degmooyinka gobolada Faafan, Nogob, Erer, Siti iyo maamulada magaalooyinka Wajaale, iyo Qabribayax.
Waxaana, soo xidhitaankii tababarkan ka hadlay gadhwadeenka geedi socodka qarshaynta iyo dabagalka xafiiska caafimaadka DDSI mudane Maxamed Ayaanle Xasan oo ka warbixiyay ahmiyada uu lahaa tababarku wuxuuna sheegay in xukuumada DDSI gaar ahaan xafiiska caafimaadka DDSI dadaal aan kala go’lahayn ugu jiro sidii bulshada deegaanka loo gaadhsiin lahaa adeegyo caafimaad oo tayaysan islamarkaana deg degsiimo leh. Gadhaweenka ayaa sheegay in tababarkan uu ahaa mid ahmiyad balaadhan u leh adeegyada caafimaadka ee xarumaha caafimaadka gaar ahaan dhinaca maaraynta xogaha caafimaadka . isaga oo ku booriyay tababartayaasha qaatay tababarkan in ay marka ay ku noqdaan goobahoodii shaqo ay ka midho dhaliyaan cashiradii ay ku barteen tababarka.
Waxaa kale oo ka hadlay soo xidhitaankii tababarka iskuduwaha dabagalka xogaha caafimaadka ee xafiiska caafimaadka DDSI mudane Wali Axmed Nuur oo sharaxaad dheer ka bixiyay ujeedooyinka laga lahaa tababarka. Wuxuuna sheegay in uu ahaa tababar lagu xoojinayay hirgalinta nidaamka maaraynta xogaha caafimaadka iyo helitaanka xogaha caafimaad ee deg dega ah gaar ahaan xogaha caafimaadka hooyada iyo dhalaanka. Isaga oo intaa ku daray in nidaamka maaraynta xogaha caafimaadka ee la hirgalinayaa yahay mid lagu salaynayo aaladaha moobilka oo xogaha caafimaadka laga helidoona lays kuguna gudbindoono aalada moobilka taasi oo wax wayn ka qaban doonta ayuu yidhi dadaalada loogu jiro ka midho dhalinta qorshayaasha caafimaadka iyo gaadhsiinta bulshada deegaanka adeeg caafimaad oo tayadiisu sarayso.